Duqa magaalada Muqdisho iyo dhigiisa Istanbul oo heshiis kala saxiixday (Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa la kulmay Duqa magaalada Istanbul Dr. Kadir Topbas, iyagoo kala saxiixday heshiis iskaasho oo dhinacyo badan taabanaya.
Kulankan ayaa waxaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ku wehliyay xubno ka tirsan Maamulkiisa oo ka qeyb galay shirkii labada maalmood socday ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya.
Duqa Muqdisho ayaa ka codsaday Duqa magaalada Istanbul inay dhisaan wadada 30-ka oo ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho, kaasoo bur bur xoogan uu ka muuqdo.
Sidoo kale waxaa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka soo socda, iyadoo magaalada Muqdisho ay marti gelineyso doorashooyin, isla markaana ay muhiim tahay sidii loogu diyaarin lahaa.
Labada Duq magaalo ayaa is tusay sida lagama maarmaan u tahay in la mataaneeyo Istanbul iyo Muqdisho, isla markaana Istanbul ka qeyb qaadato howlo mashaariic ah oo laga fulinayo Caasimada Muqdisho, sida dhisida Jidadka, in loogu deeqo Basas Gobolka Banaadir iyo dab damisyo.
Duqa magaalad Istanbul Dr Kadir Topbas ayaa sheegay in 15-ka Mach ay koox qubaro ah oo qiimeyn ku sameynaya baahiyaha ay qabto dowladda hoose ee Muqdisho ay soo diri doonaan Magaalada Muqdisho.
Heshiiskan ayaa lagu balamay si deg deg ah in loo dhaqan geliyo, isla markaana labada magaalo ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo bilic soo celinta, iyadoo Duqa Magaaladda Istanbul uu balan qaaday in si dhaqso ah ay u soo diri doonaan Basaska iyo Dab-damis loogu deeqay Gobolka Banaadir.
Saddex ruux oo isku qoys ahaa oo ku geeriyooday Madaafiic ku soo dhacay Wardhiigley